/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁၉) သို့မဟုတ် ... အရုဏ်တက်ေလ ညဉ့်နက်ေလ
ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁၉) သို့မဟုတ် ... အရုဏ်တက်ေလ ညဉ့်နက်ေလ
မိသားစု တစ်စုမှာ မိဘြပီးရင် အြကီင်္းဆံုးက မိသားစုအတွက် တာ၀န်အြကီးဆံုးမဟုတ်ပါလား။ မိဘမရိှရင် ဒီမိသားစုမှာ အြကီးဆံုးက လက်လွှဲတာ၀န်ယူရြပီ။ မိဘ ရိှေနေသးတယ်ပဲထားဦး အြကီးဆံုးက ရုန်းကန်ေနရတာ အများြကီးပါ။ မိဘေတွ မရိှေတာ့တဲ့ေနာက်ပိုင်း မိဘေနရာမှာ ၀င်ေရာက် အစားထိုးြပီး အငယ်ေတွရဲ့ တာ၀န်ကို ယူရတဲ့အခါ အစစအရာရာ အြကီးဆံုးက တာ၀န်ယူရေတာ့မယ်။ အခု ြမန်မာြပည်မှာ ဒီလို သိတတ်တဲ့ မိန်းကေလးေတွ အများြကီးပါ။ ဒါေပမယ့် အဲ့လို တာ၀န်ယူရတဲ့အခါမှာ မိန်းမတစ်ေယာက်အေနနဲ့ ဘယ်လို ရှာေကျွးမလဲ၊ ဘယ်လို တာ၀န်ယူမလဲ၊ ဘယ်လို ဘ၀ကို ရုန်းကန်ြပီး တိုးတက်ေအာင် လုပ်ေဆာင်မလဲ။ အငယ်ေတွရဲ့ စား၀တ်ေနေရး၊ ေကျာင်းစရိတ်ေတွအတွက် ရှာရေတာ့မယ်။ ြမန်မာြပည်မှာ ေကျာင်းတစ်ခုတက်ရံုနဲ့မရေတာ့ဘူး၊ ကျူရှင်စရိတ်ေတွကအစ သူများနဲ့တန်းတူ တက်နိုင်ေအာင် လုပ်ေပးရမယ်။ တကယ့်ကို ခက်ခဲလှပါတယ်။
ဒီလို မိန်းမတစ်ေယာက်ကို ရိှသမှျေသွးစုပ်ယူဖို့ ၊ ကာမသိုက်တူးဖို့ ယုတ်မာသူေတွကလည်း အြမဲတမ်း ေချာင်းေနြကပါတယ်။ မိန်းမငယ်တစ်ေယာက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကို အခွင့်ေကာင်း ယူချင်သူေတွက အများသား။ စား၀တ်ေနေရး ခက်ခဲလာချိန်မှာ မိမိရဲ့ ခန္ဓာနဲ့ရင်းြပီး ရှာေကျွးရတဲ့အထိ လုပ်ေနြကရပါြပီ။ အင်မတန်မှကို ၀မ်းနည်း ေြကကွဲဖွယ် ေကာင်းလှပါတယ်။ ကာရာအိုေကဆိုင်ေရာက်ကုန်တယ်၊ ဘီယာဆိုင်ေရာက်ကုန်တယ်၊ ေနာက်ဆံုး ညငှက်ဘ၀နဲ့ပါ ကျင်လည်ြကရတယ်။ ေကာင်းေရာင်း ေကာင်း၀ယ်စားရေအာင် ဘွဲ့ရတစ်ေယာက် ြဖစ်သည်ထားဦး ြမန်မာြပည်မှာ ဘွဲ့ရတစ်ေယာက် အလုပ်ေကာင်းေကာင်း ရပါရဲ့လား။ ဒီလိုပဲ ဘ၀များစွာအတွက် ဘ၀တစ်ခုကို ရင်းြကရတယ်။ ဘ၀များစွာ အသက်ရှင်ဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ သိက္ခာ၊ မာန၊ ရိှသမှျအရာအားလံုးကို ေြခစံုမှာ၀ပ်ရင်း စေတးေနြကရတယ်။ အြကီးဆံုးေတွကိုပဲ ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ တြခား အေြကာင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရုန်းကန်ေနြကရြပီး ေငွေြကးအတွက် ဒီလိုလုပ်ေနရတဲ့ မိန်းကေလးေတွ ြမန်မာြပည်မှာ များသထက် များလာပါတယ်။ ဒီလိုအြဖစ်အပျက်ေတွကို မြဖစ်ေအာင် ဘယ်သူ့မှာ တာ၀န်အရိှဆံုးလဲ။ အဓိကကေတာ့ ပညာေရး၊ စီးပွားေရး၊ လူေနမှုအဆင့်အတန်းေတွ၊ ကုန်ေဈးနှုန်းြမင့်မားမှုေတွ၊ လာဘ်စားမှုေတွ၊ ဒီဒဏ်ေတွကို မခံနိုင်ေတာ့တဲ့အခါ ဘယ်ေလာက်ပဲ အကျင့်စာရိတ္တေကာင်းေကာင်း ဒီလိုဘ၀မျိုးကို ေရာက်ကုန်ြကရပါတယ်။
ဒီလိုမိန်းကေလးမျိုးကို ချစ်ဖို့၊ ချစ်ရဲတဲ့သတ္တိ၊ လက်ထပ်ယူရဲတဲ့ ေယာကျ်ားေလးေတွရဲ့အချစ်ကို ေလးစားမိပါတယ်။ ကာမတစ်ခုတည်းကို ဦးစားမေပးတဲ့အချစ်၊ နားလည်မှုေပါင်းများစွာနဲ့ချစ်ြကတဲ့ အချစ်စစ်ကို တကယ်ကို ချီးကျူးမိပါတယ်။
ဒီလို ဘ၀များစွာအတွက် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရင်းြပီး ရှာေကျွးခဲ့တဲ့ မိန်းကေလးထဲမှာ မြငိမ်းေအးလည်း ပါခဲ့ပါတယ်။ သူ့ဘ၀အေြကာင်းကို ဇာတ်ညွှန်း၊ ဇာတ်လမ်းေရးြပီး ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ အင်မတန်မှ ၀မ်းနည်း ေြကကွဲစရာေကာင်းလှတဲ့ ဘ၀ေလးပါ။ အေြခအေနအမျိုးမျိုးနဲ့ အြကမ်းအတမ်းေပါင်းများစွာကို ကူးြဖတ် ြကိုစားခဲ့ရသူတစ်ဦးပါ။ သူ့အတွက် မှျေ၀ရိုက်ကူးခဲ့သူအားလံုးကို ကျွန်ေတာ်အြမဲတမ်း ေကျးဇူးတင်လျက်ပါ။ ြမန်မာြပည်မှာ ြဖစ်ပျက်ေနတဲ့ တကယ့့်ဘ၀တစ်ခုကုိရိုက်ကူးခဲ့တာဟာ ေတာ်ေတာ်များများကို ကိုယ်စား ြပုေနပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ ဒီလိုရိုက်ကူမှုမျိုးကို အြမဲတမ်း ြကိုဆိုသင့်ပါတယ်။ ြကိုဆိုထိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲကေန မှတ်တမ်းတင်သင့်ပါတယ်။
စိတ်ထားလှေပမယ့် ဘ၀မလှခဲ့ရှာေသာ မြငိမ်းေအး .. ြဖစ်ေလရာ ဘ၀တိုင်းမှာ ဒီလိုအြဖစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ မြကံုေတွ့ပါေစနဲ့၊ ြမန်မာြပည်မှ ဤကဲ့သို့ ြကံုေတွ့ေနရသူေတွ ထပ်မြဖစ်ပါေစနဲ့၊ ြကံုေတွ့ေနရသူေတွလည်း လွတ်ေြမာက်နိုင်ပါေစလို့ ........... ဆန္ဒများစွာြဖင့် (မှတ်တမ်းတင်သူ)
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, September 15, 2008
ဒါဆို ဒီအေခွက ြဖစ်ရပ်မှန်ေပါ့ေနာ်။
ဟုတ်ပါတယ် ညီမ..။ ဒါဟာ တကယ့် ၀မ်းနည်ဖွယ်ြဖစ်ရပ်ပါ။ ြမန်မာြပည်မှာ ဒီလိုမျိုး ေြကကွဲ၀မ်းနည်းဖွယ်ေတွ များသထက် များလာေနပါြပီ ။
အကိုေရ .. ြကည့်ြဖစ်ေအာင်ြကည်လိုက်အုံးမယ်. ြမန်မာြပည်မှာ အဲဒီလို အြဖစ်မျိုးေတွ များသထက်များလာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ်ညီမလဲ ြကားဖူးပါတယ် အဲ့လိုအြဖစ်အပျက်မျိုးေတွကိုေလ ကုန်ေဈးနှုန်းြမင့်မားလာမှု၊ စီးပွားေရးြကပ်တည်းမှုေတွရဲ့ တုိုက်စားမှုကိုုဘယ်ခံနိုင်မလဲ ြကာလာေတာ့ လူတေယာက်ရဲ့အရှက်ကို၀မ်းေရးက ဖံုးသွားတာေပါ့ေလ... ဒါေပမဲ့တချုိ့မိန်းကေလးကျေတာ့လဲ အိမ်ကလဲအဆင်ေြပတယ် သူကိုယ်တုိင်က၀တ်ချင်၊ စားချင်၊ ေခတ်မှီချင်ေတာ့ ဒီလိုဘ၀မျိုးထဲကိုခုန်ဆင်းသွားတာလဲရှိပါတယ် နိှုင်းယှဉ်ရင်ေတာ့ ဘယ်လိုမှယှဉ်လို့မရနိုင်ဘူး မမှီနိုင်ပါဘူး ဒီလိုမိန်းကေလးမျိုးကိုချစ်ရဲတဲ့သူကိုလဲ ကယ်တင်ရှင်လို့ပဲေခါ်မလား၊ လူစွမ်းေကာင်းလို့ပဲေြပာရမလား အင်း... ဘာလို့ဆိုေတာ့ေနာက်ကွယ်မှာက ေြပာမဲ့၊ လက်ညှုိးထိုးမဲ့သူေတွ၊ ဟားတိုက်မယ့်သူေတွကများတယ်ေလ သူကလဲတကယ့်သူရဲေကာင်းပါပဲ
ကဲ ကိုလင်းဦးဆိုရင်ေရာ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...
လိုအပ်မှုနဲ့ တတ်နိုင်မှုဟာ ဘက်မမှျခဲ့ရင်
ကျရာေနရာမှာ ၀င်သရုပ်ေဆာင် ေနြကတဲ့
ကျေနာ်တို့ ဇါတ်ေဆာင်ေတွမှာ ......
ြဖစ်ရပ်မှန်ဆိုလို့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ြကည့်ပါအံုးမယ်။
စိတ်မေကာင်းလို့ ဘာေြပာရမှန်းေတာင် မသိေတာ့ဘူး။
တစ်ေယာက်စီက တစ်ေယာက်စီကို ကယ်တင်ရံုနဲ့ ြပီးနိုင်တဲ့ ြပဿနာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူးေလ။
လွတ်ေြမာက်ေအာင် ဘယ်လိုကူညီလို့ ရမလဲ . . . သိချင်လိုက်တာ။
၀မ်းနည်းဖွယ်ေတွပါပဲ ကိုလင်းဦးေရ.. တစ်ကယ့်ကို စိတ်မေကာင်းစရာေတွပါပဲ။ အဲဒီလို အြဖစ်ေတွ မြဖစ်ေအာင် ကိုယ် တတ်နိုင်သမှျ ကူညီေပးနိုင်ြကရင် အေကာင်းဆံုးပါပဲဗျာ။
ဒါမျိုး ြဖစ်ရပ်က နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတာပဲ။ အဲ... ဒါေပမယ့် အေရအတွက် နည်းသလား၊ များသလားဆိုတာေတာ့ စဉ်းစားသင့်လှသဗျို့။
မိန်းကေလးေတွဒီလိုြဖစ်လာပင်မဲ့ ခုေခတ်မှာ ေယာကျင်္ားေလးေတွလဲ သိုက်တူးလာြကြပီ... ဒီလိုမျိုးကိုနားလည်ြပီးချစ်ေပးနိုင်မဲ့ေယာကျင်္ားကေရာ ဇာတ်လမ်းအရလား.. အြပင်မှာတကယ်ရှိခဲ့တာလား.. ေတွးမိတယ်.. ဒီေခတ်မှာေယာကျင်္ားေတွက မိန်းမေတွထက်ပိုတွက်လာေနသလိုပဲ.. မေဗဒါအထင်ပါ.. ဘယ်သူကို့မှမတိုက်ခိုက်လိုပါ... မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲ ြကိုက်သလိုသေဘာထားကဲွလဲွနုိင်ပါတယ်.. ကိုလင်းဦး အညွန်းေကာင်းလို့ ြမန်မာကားမြကည့်တဲ့ကျမ ဒီကားေတာ့ အချိန်ရရင်ြကည့်လိုက်ပါအံုးမယ်...
ြကားေနရတာေတွေတာ့ အများြကီးပါပဲ .. ရိုးလည်းမရိုးနုိင်ဘူး .. စိတ်လည်းမေကာင်းဘူး ..
ညီမလည်း ဒီပို့စ်ေလးကိုဖတ်မိြပီး အားအင်ေတွေတာင်ကုန်ခမ်းသွားသလိုခံစားရတယ်. အရမ်းကိုေြကကွဲရတာေတွပါ. အားလံုးရဲ့တာ၀န်လို့သေဘာထားြပီး စုေပါင်းေြဖရှင်းြကတာေပါ့..ဒီဇာတ်လမ်းေလးရဲ့နာမည်ကိုသိချင်ပါတယ်.
စာေရးသူ ကိုလည်းေကျးဇူးအရမ်းတင်မိပါတယ်. များေသာအားြဖင့် ေယာကျ်ားေလးေတွက ကိုယ့်ချစ်သူကိုြဖူစင်သန့်ရှင်းေနမှလို့ သိထားရတာ. အကိုေြပာြပသလိုဆိုရင် အရမ်းကိုစိတ်ဓာတ်အင်အားြပည့်၀ြပီး သူများလက်ညိှုးထိုးတာကို ေနာက်မတွန့်ဘဲနဲ့ချစ်ရဲတဲ့သတ္တိေတွရှိမှြဖစ်မှာေနာ်.?